‘पार्टिका लागि दिनमा २ घण्टा समय दिनेलाई सदस्यता दिऔँ’ « Chhahara Online
‘पार्टिका लागि दिनमा २ घण्टा समय दिनेलाई सदस्यता दिऔँ’
१७ साउन । नेपाली कांग्रेसका केद्रिय सदस्य दिपक गिरीले पार्टिका लागि दिनमा करिव २ घण्टा समय दिने कार्यकर्तालाई पार्टिको सदस्यता दिनुपर्ने बताउनु भएको छ ।
दंगिशरण गाउँपालिका वडा नं. १ को आयोजनामा बाँकीमा भएको कार्यकर्ता भेटघाटमा नेता गिरीले पार्टिका लागि सक्रिय रुपमा करिब २ घण्टा समय दिने कार्यकर्तालाई नयाँ सक्रिय सदस्यता दिए मात्र पार्टि अगाडि बढ्ने बताउनु भयो ।
पार्टिका क्रियासिल सदस्यहरुलाई विधानको बारेमा जानकारी गराउदै नेता गिरीले पार्टिलाई बलियो बनाउन नयाँ सदस्यता वितरण ख्याल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । वडा नं. १ का अध्यक्ष मानविर चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अथिति गिरीले सवैसंगको सहकार्यले मात्र पार्टि अगाडि बढ्ने भएकाले सक्रिय र समावेशीमा पनि ध्यान आग्रह गर्नुभयो ।
पुर्वमन्त्री समेत रहेका गिरीले एक घर एक सक्रिय कार्यकर्ता बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा महासमिति सदस्य केशव आचार्यले पार्टिका लागि योगदान र सक्रिय व्यक्तिलाई पार्टि सदस्यता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै कार्यक्रममा क्षेत्रिय सभापति जगत खड्का, क्षेत्र नं. ३ क का सभापति घनश्याम ढकाल, दंगिशरण गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पिमा खड्का, जिल्ला सदस्य यज्ञ विष्ट लगायतले पनि आफ्नो भन्दा सक्रिय कार्यकर्ता मात्र नयाँ सदस्यता वितरण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।